राम्रो संस्कारको थालनी आफैबाट गर्ने की? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:४५ English
राम्रो संस्कारको थालनी आफैबाट गर्ने की?
पश्चिमी राष्ट्रहरुमा मानिसको जीवन मेसिन सरह हुन्छ । उनीहरुलाई न खाने फुर्सद छ, न साथि भाईहरुसंग बसेर एक छिन गफिने फुर्सद छ । बिहान उठ्यो, ब्रेकफाष्टको नाममा ब्रेड लियो चपाउँदै गाडी स्टार्ट गर्यो, हुईकियो काममा । फुटपाथमा हिड्नेहरु पनि दायाँ वायाँ के भईरहेको छ, वेमतलव आफ्नो गन्तब्य तिर लम्किरहेका देखिन्छन् । अमेरिकाको न्युयोर्क, जापानको टोकियो वा फ्रान्सको पेरिस वा चाइनाको बेईजिङ् यी ठूला शहरहरु जहाँ जनघनत्व अत्यधिक रहेको छ, त्यहाँ समेत मानिसहरु एक अर्कासंग गफिएर बसेको देख्न पाईदैन । किनकी उनीहरुलाई गफ गरेर बस्ने समय नै छैन । ट्रेनमा होस या बस सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा समेत किताब पढ्ने गरेका देखिन्छन्, उनीहरु । समय बलवान छ, यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरु सचेत देखिन्छन् ।
हाम्रो देशको त कुरै अर्को । युवा जगत रक्सी चुरोटको नसामा, दिनभर घरमा रहने अधिकांश गृहिणीहरु हिन्दी सिरियलमा फन्दामा । केही काममा लागेका ब्यक्तिहरु समेत साँझ परेपछि भट्टी पसल तिरको धन्दामा । यसो सरकारी कार्यालयहरुमा नियाल्दा हाकिम साहेबको कुर्सी खाली छ, हिटरको मिटर घुमिरहअ‍ेको छ, हामिम साहब कहाँ गफिएर बसेका छन्, खोजी गर्दै ठिक्क । आफ्नो काम समयमा नहुँदा सेवाग्राहीलाई दिक्क ।
शहरका गल्ली चोकहरुमा मानिसहरुको भिडभाड देखिन्छ । धेरै मान्छेहरु चोक चोकमा जम्मा भएर दिन भर अरुको विषयमा कुरा काटेर समय बर्बाद गरिरहेका भेटिन्छन् । दुई जना भए तेस्रोका बारेमा कुरा ग¥यो । दोस्रो हिड्यो तेस्रो आई पुग्यो त्यसपछि पहिलो र तेस्रो मिलेर दोस्रोको बारेमा कुरा शुरु भैहाल्यो । दिन प्रतिदिन बढ्दो शिक्षित बेरोजगारी समस्याले गर्दा माथिको परिस्थिति हाम्रो देशको नियती बन्दै गईरहेको छ ।
एक दिन म न्युरोडको फुटपाथबाट विशालबजार तर्फ गईरहेको थिए । विशालबजारको दक्षिणतर्फको मोडमा ५–६ जना युवाहरु पालैपालो चुरोट तान्दै बाटो अबरोध गरेर चाहिने नचाहिने विषयमा अनाबश्यक गफिदै थिए । एउटाले भन्दै थियो, “के गर्ने यार, जागिर कहिं पाइन, बा आमाले काम गर मात्र भन्छन् । के काम गर्ने हो केही थाहा छैन ।” अर्कोले भन्यो, “जागिर नपाएर त यो रक्सी चुरोटलाई साथी बनाएको नि होईन, कि कसो साथि हो !” सबैले एकै स्वरमा भने, “हो त नी यार !”
छेवैमा रहेकी नाङ्गले पसल्नी दिदिलाई मैले सोधे, “दिदि यी केटाहरुलाई तपाइले सधै देख्नुहुन्छ ?” उनले जवाफ दिइन, “यिनीहरुको केही काम छैन, कहिले यो चोक, कहिले त्यो चोक ढुक्ने, चुरोट, खैनी खाने साँझ परेपछि रक्सी, यिनीहरुको दैनिकी यही हो हजुर ।”
“के गर्ने, सरकारले यस्ता केटाहरुका लागि केही काम दिए हुनेथियो, काम पाए देखि यसरी अल्लारे भएर के बस्थे होला र ।” उनी भन्दै थिइन । उनको बोलीमा पिडा मिसिएको थियो । त्यो युवाहरुको जमातमा उनको २२ वर्षे छोरो समेत सामेल रहेछ ।
“तपाईको छोरालाई पनि यही काम लगाए हुन्थ्यो नि त १” मैले उनलाई सम्झाउने प्रयास गरे । “अहिलेका केटाहरुले यस्तो काम किन गर्थे, हजुर । यस्तो काम गर्न उनीहरुलाई साथिभाईको अगाडी लाज हुन्छ रे । म यस्तो उस्तो काम गर्दिन, मलाई कतार पठाईदेउ, दुबई पठाइदेउ भन्छ । बुढाले ज्यामी काम गर्छन, मैले यही दोबाटो कुर्नेगर्छु । दूई जनाको कमाईले बल्ल तल्ल मुखमा माड लागेको छ । कहाँबाट तेल्लाई कतार र दुबई पठाउने ।” उनले एकै सासमा आफ्नो सबै कुरा बेलिविस्तार लगाईन ।
माथि उल्लेख गरिएको नाङ्ले पसल्नी दिदि र उनको २२ वर्षे छोरा, हाम्रो देशमा हुर्किरहेको बेरोजगारी समस्यका प्रनिनिधि पात्र हुन् । यि यस्ता विसंगतीहरुबाट हाम्रो समाज आक्रान्त छ । हामी कस्तो संस्कारमा हुर्किरहेका छौं । हामीले हाम्रा सन्ततीहरुलाई कस्तो संस्कार दिईरहेका छौं । शायद हामीलाई नै पत्तो छैन । यस विषयमा हामीले अत्यन्त गम्भिर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । अझ भनौं त्यस बारेमा सोच्न धेरै ढिला भैसकेको छ ।
धेरै गृहिणी महिलाहरुको दिन काट्ने मेलो भनेको अरुको बारेमा गफ चुट्ने र टि.भी.मा आउने सिरियल हेर्नु नै बनेको छ । छोराछोरीहरु कस्तो संगतमा लागेका छन् । घरबाट निस्के पछि कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, कसैलाई न सोच्ने फुर्सद छ न छोराछोरीलाई सम्झाउने समय नै छ ।
आमाको कोखमा नौ महिना बसेर एउटा शिशुले यो धर्तीमा जन्म लिन्छ । आमाको काखमा खेल्दै वाल्यकाल पार गरी जवानीको संघारमा टेक्दै आफ्नो भविश्यको रेखा कोर्दै अगाडी बढ्न थाल्छ । त्यो भर्खर जन्मेको अबोध शिशु जन्मदै नकारात्मक संस्कार वा भावना लिएर आएको त हुदैन । उ दिनानु दिन बढ्दै बाबुआमा, परिवार, ईष्टमित्र अनि समाजबाट आफुले सुनेका देखेका कुराहरुलाई विस्तारै अगाल्दै सिको गर्दै अगाडी बढ्छ । यसरी एउटा बालकको लागि असल संस्कारको शुरुवात उसको घरबाटै हुन्छ । उसको लागि पहिलो पाठशाला पनि घर नै हो ।
तर अहिलेको ब्यस्त समाजमा धेरै अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु कस्तो संस्कारमा गईरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउने चेष्टा समेत गर्दैनन् । फलस्वरुप अहिलेका किशोर किशोरीहरु गलत संगतीमा पर्दै गई उनीहरुमा दिनानुदिन नकारात्मक प्रवृत्ती हावी हुदैगईरहेको छ । आफ्ना अग्रजहरुको कुरा सुन्ने त्यस विषयमा आफ्नो बिचार अभिब्यक्त गर्ने, छलफलमा सहभागी बन्ने सम्मको धैर्यता उनीहरुमा देखिदैन । यसरी युवा शक्ति यस्तो गलत संस्कारमा जानुको एउटा प्रमुख कारकको रुपमा बढ्दो युवा बेरोजगारी समस्यालाई पनि लिन सकिन्छ । “खालि दिमाग, शैतानका घर” भन्ने त उखान नै छ ।
यदि युवालाई रोजगारीको अवसर दिने हो भने युवावर्ग काममा ब्यस्त हुन्छन्, गलत मार्गमा लाग्ने फुर्सद नै पाउदैनन् । फलस्वरुप हरेक युवा असल संस्कारी बनेर देशको विकास र निर्माणमा सहगागी हुने मौका पाउछन् । जसबाट हाम्रो समाज र देशको ईज्जत प्रतिष्ठाको जग बलियो हुदैजान्छ र देश समृद्धि तर्फ अगाडी बढ्न सक्छ ।
यस विषयमा अहिले सम्मका सरकार उदासिन नै देखिएका छन् । सरकार चलाउने, देश हाक्ने हाम्रा नेताहरु विदेश सयर गरिरहन्छन्, तर त्यहाँको विकास, समृद्धि, असल संस्कारलाई हेर्छन्, उतै छाडेर आउछन् । बुझेर पनि बुझ्पचाउछन् । हाम्रो देशको पनि विकास गर्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रमा असल संस्कारको थालनी गर्नुपर्छ । नेपाल पनि संसारको एक समृद्ध राष्ट्र हो र हामी समृद्ध नेपालका नागरिक हौं भन्न पाउनु पर्छ, भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि सोंच बिचार गरेको पाईएन । फलस्वरुप हाम्रा कर्मठ युवा यस्तो सुन्दर देशको नागरिक भएर पनि अर्काको देशमा भासिएर त्यहाँको दास बन्न बाध्य भैरहेका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका जस्ता विकसित देशका पिआर र ग्रीनकार्डमा बिकिरहेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भए यताका सबै जसो सरकारको नियती यस्तै रह्यो । यस्तै विसम परिस्थितिहरुबाट देश र जनता गुज्रीरहे । हरेक सरकार र पार्टीहरुले हेरिरहे ।
अहिले हाम्रो देश राजतन्त्रलाई समेत फ्याकेर गणतन्त्रात्मक मुलुकमा बदलिएको छ । जनभावना अनुरुप संबिधान सभाबाट मूल कानूनको रुपमा नेपालको संबिधान २०७२ पाएको छ । संबिधानको भावना अनुरुप स्थानीय निकाय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भईसकेको छ । यस परिप्रेक्षमा देशले एउटा नयाँ मोड लिएको छ । बिकास तथा निर्माणको पक्षमा नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशको लागि अब स्थिर र सबल सरकारको खाँचो छ । बिकास र निर्माणको माध्यमबाट नेपाललाई एउटा समृद्ध देशको रुपमा अगाडी बढाउने छन् भन्ने अपेक्षका साथ जनताले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बलियो बहुमतका साथ जनमत प्रदान गरेका छन् । राजनीतिक तथा ब्यक्तिगत आचरण र संस्कारमा शुद्धता ल्याई देश र जनताको हित अनुकुलका नीति तथा कार्यक्रम सहित देशलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने संकल्पका साथ अघि बढ्न अब बन्ने सरकारलाई प्रेरणा मिलोस् । काम नपाएर हल्लिएर दिन काटिरहेका युवाहरुलाई रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर देश निर्माणमा सहभागी गराउने विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको मन मिलोस् । अहिलेको जनभावना पनि यही रहेको छ ।
सरकारको मात्र मुख ताकेर पनि हुनेवाला छैन । हामी देशका कर्मठ जनता पनि धेरै मात्रामा सुधारिनु आबश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको मेरो सम्पत्ति हो, त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको मैले पनि सही सदुपयोग र सुरक्षा गर्नु पर्छ भन्ने भावना हामीमा पनि जागृत हुन जरुरी छ । यसका अलाबा अरु कसैलाई सरापेर आलोचना गरेर खर्चिने समयलाई सकारात्मक सोंचका साथ सही काममा उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । समस्याबाट भागेर होइन सामना गरेर समाधान खोज्नु पर्छ । विशेष गरी युवा पुस्ता आज राज्यको साझेदार र भोलिको नेतृत्वकर्ता भएकोले हामी युवापुस्तामा पनि आजको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी योग्यता र क्षमताको विकास गर्नुपर्नेछ । परिवर्तन कसले गरिदेला भन्ने होईन, परिवर्तनको थालनी हामीबाटै गरौं । आजै देखि हामी सबैले आफु आफुमा भएको खराब आचरण र गलत संस्कारलाई त्यागी असल संस्कारी बन्न आफैबाट शुरुवात गरौं ।
(लेखक हरिप्रसाद पाण्डे कानुन ब्याबसायी हुनुहुन्छ)
९ पुष २०७४, आईतवार १०:४४ मा प्रकाशित